Ukuthuthukiswa Flow Indwangu imbobo - China Qingdao Aedis Indwangu imbobo
FlowCon emoyeni uma liqhathaniswa nezibani nge ezinkulu POWERFLOW emoyeni Jets ingasetshenziswa ezihlukahlukene izicelo. Ziyakwazi esebenza kahle kakhulu ngesikhathi entrapping futhi ukuxuba emoyeni. Nokujikijela eside Jets emoyeni Ikwazi ukutshuza ngempumelelo emoyeni eliwu ezindaweni ezipholile phansi. Ungqimba kanye velocity we Jets kungabangela air kwegazi 10'-40 'ngaphesheya diffuser. With diffuser FlowCon POWERFLOW exhunywe kwi iyunithi ukwakheka emoyeni, emoyeni ezingenayo kungenziwa abahlakazekile ngokulinganayo phezu yokukhiqiza endaweni enkulu. Ukugcina amandla, lomoya unheated kungenziwa iqondiswe phezulu azihlanganise efudumele ophahleni emoyeni ebusika bese uqondiswe phansi pholisa izindawo umsebenzi ehlobo. Umlandeli futhi FlowCon POWERFLOW uma liqhathaniswa nezibani ungawusebenzisa nje ezisetshenziswe ngesikhathi kuqhunyiswa efudumele ophahleni emoyeni phansi azihlanganise cooler air phansi. Amandla ukonga kungaba eningi. Ezindaweni zomsebenzi ashisayo, elula air kwegazi kungaba ngcono ukukhiqiza. Elikhulu POWERFLOW emoyeni Jets kungenziwa osendaweni kahle endleleni diffuser ukuze pholisa iziteshi umsebenzi ngamunye. PowerFlow Indwangu air Amapayipi ukuletha evaporative selehlile emoyeni phansi ngokusebenzisa izimbobo ezinkulu. PowerFlow emoyeni Jets isukela 1 "kuya ku-6" ubukhulu. izincomo Isicelo zihlanganisa; ezimbonini, Warehousing, kanye nokukhiqiza izindawo, ukuzivocavoca, esegcekeni, nokudayisa, sokudla ezitolo, futhi izakhiwo lesikhashana.
10 oz. Vinyl Camera Polyesterlokushisa okuphezulu Okuningi imboboPolyester - Elwa Namagciwane polyethylene
Ikhebula Halo Ukumiswa HD Rail
Sokudla Stores ukuzivocavoca Industrial Manufacturing Izindawo Pools
Air Jet Imigudu Condensate sokukhipha Dweba Izintambo Indwangu damper nokufaka Yangaphakathi Ukuphela Cap
Uziphu futhi Velcro Connections
polyethylene uyakwazi ukubhekana nezimo ezinzima kumakhemikhali kakhulu futhi uyokuma emoyeni ezithwalwa izinhlayiya kakhulu. It has a lokushisa ncibilika 180 ° F no-zingase zihlanzwe ngumuntu umlomo wombhobho spray hose kanye shayela. Polyethylene umlilo cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi futhi ihlangabezana ASTM E-84 Class 1, AC 167, LC 1005. ICC-ES umbiko: ESR-2646.
Polyester kuyinto grade premium Indwangu camera. It has a lokushisa ncibilika 350 ° F no kungenziwa zihlanzekile ezigabeni ezincane. Polyester umlilo cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi ihlangabezana ASTM E-84 Class 1, AC 167, LC 1005. ICC-ES umbiko: ESR-2646.
* Ukuze Special kuphela.
Polyester kuyinto grade premium Indwangu uncoated nge ejenti elwa namagciwane. It has a lokushisa ncibilika 350 ° F no kungenziwa zihlanzekile ezigabeni ezincane. Polyester umlilo cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi, ihlangana ASTM E-84 Class 1 no libhekwa UL.
10 oz. Vinyl Camera Polyester
Vinyl yindwangu camera eyokuma emoyeni ezithwalwa izinhlayiya kakhulu. It has a lokushisa ncibilika 180 ° F no-zingase zihlanzwe ngumuntu umlomo wombhobho spray hose kanye shayela. Vinyl umlilo cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi futhi ihlangabezana ASTM E-84 Class 1.
XStatic kuyinto anti-static Indwangu camera ukuthi izici umenzeli imithi elwa nawo. It has a lokushisa ncibilika 250 ° F no kungenziwa zihlanzekile ezigabeni ezincane. XStatic umlilo cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi futhi ihlangabezana ASTM E-84 Class 1.
High Temp fiberglass kuyinto camera fiberglass Indwangu ukuthi izici lokushisa ncibilika 500 ° F. Ingase futhi ingasetshenziswa ezinye izinhlelo zokusebenza. I-fiberglass kuyinto camera futhi ungaba emoyeni Jets. Temp High fiberglass umlilo cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi, ihlangana ASTM E-84 Class 1 no libhekwa UL.
Amaphaphu ikhebula ukhetho ukonga kakhulu. Iyatholakala kuzo zonke diameters, Single ikhebula-30 "ububanzi futhi kabili-48" ububanzi futhi kathathu phezulu. Snaphooks kuthiwa esilinganayo 36 "izikhungo futhi iyatholakala plastic, insimbi engagqwali. Ikhebula itholakala lashukumisa, Insimbi engagqwali, futhi vinyl camera. Uhlelo siqukethe ikhebula (3/16 "ububanzi), turnbuckle, amabhawodi kwensimbi futhi ikhebula izibopho.
b) I-halo Ukumiswa:
New Halo Amaphaphu ukumiswa kohlelo (HTS) kunikeza ukubukeka FlowCon yakho uhlelo diffuser ukuba ulele lapho uhlelo emoyeni handling ivaliwe. Lolu khetho ingasetshenziswa nge elula umugqa owodwa ikhebula ukumiswa noma olulodwa HD wesitimela ukugcina diffuser FlowCon looking ulele ngaphandle Ukuhamba. Kunomkhawulo kusuka 10 "ukuba 36" ububanzi, le ndlela ephelele izicelo lapho deflated diffuser isandla phansi kuyinkinga. Izigaba kalula sizovalwa wageza kungekho zabasebenzi eyengeziwe. Izingxenye zihlanganisa ejwayelekile umugqa owodwa ukungezwani ikhebula noma HD yethu wesitimela uhlelo olulodwa.
New HD anodized aluminium wesitimela yethu uhlelo premium wesitimela. Echachambile ukubukeka bushelelezi ngoba FlowCon Indwangu diffuser yethu uhlelo. Iyatholakala kuzo zonke diameters, ujantshi Single-30 "ububanzi futhi kabili-48" ububanzi futhi kathathu phezulu. Awama-Glider kuthiwa esilinganayo 36 "izikhungo futhi iyatholakala plastic. Uhlelo siqukethe HD wesitimela, ujantshi izisekelo, couplers, futhi izisekelo mpo (isivinini link). Ububanzi egoba ayatholakala ukuhlangabezana indololwane engaba.
Olandelayo: Micro Flow Indwangu imbobo
Air Blower imbobo
Air Canvas imbobo
Air Somuhlwa Nezimo imbobo
Inkonyane Barn amapayipi omoya
Uthuli Isizinda imbobo
semibukiso Indwangu amapayipi omoya
Explosion Ubufakazi Nezimo imbobo
Fire Resistant Indwangu imbobo
Fire Resistant Nezimo imbobo
Nezimo Air ababephelezela
Nezimo air Amapayipi
Nezimo HVAC imbobo
Ukudla Industry Indwangu amapayipi omoya
Fume Isizinda Nezimo imbobo
ingubo Imboni Indwangu amapayipi omoya
Isigamu Round HVAC imbobo
HVAC ngci imbobo
ngci Nezimo amapayipi omoya
ngci Nezimo Vent imbobo
Leisure Indawo amapayipi omoya
perforated Nezimo imbobo
Pool Indwangu amapayipi omoya
kukanxande Nezimo imbobo
Round amapayipi omoya
Round Air ababephelezela
Round Indwangu Air ababephelezela
Round Nezimo Air ababephelezela
Round HVAC imbobo
Semi Circle Indwangu imbobo
Semi Circle Indwangu ababephelezela
Semi round Indwangu imbobo
Semi round Indwangu ababephelezela
Ezemidlalo Indwangu amapayipi omoya
Isuphamakethe Indwangu amapayipi omoya
Textile Nezimo imbobo
Textile umkhakha Indwangu amapayipi omoya
Thermal Futhi Acoustic imbobo
Somuhlwa A ir imbobo
Somuhlwa Nezimo imbobo
Warehouse ka-Indwangu amapayipi omoya